Iraan misaa’ela fageenya jiddu galeessa furguuggeffamu oomishuu beeksiste - NuuralHudaa
Home/Odeeyfannoo/Eeshiyaa/Iraan misaa’ela fageenya jiddu galeessa furguuggeffamu oomishuu beeksiste
Iraan misaa’ela fageenya jiddu galeessa furguuggeffamu oomishuu beeksiste
Iraan waggaa 40ffaa warraaqsa ummata biyyattii sababeeffachuun, misaa’ela haaraya fageenya kilomeetra 1,350 furguuggeffamu yaaliin geggeessite milkaahuu beeksiste. Ministeerri ittisa biyyattii Amir Haatim akka jedhetti, misaa’elli Iraan Hoveizeh jechuun moggaafte kun yeroo gabaaba keessatti baay’innaan oomishamee tajaajila ittisa biyyaatiif kan oolu tahuu hime.
Iraan bara 2015 irraa eegalee misaa’ela fageenya jiddu galeessaa fi fageenyaa dheeraa furguggeffamu ogeeyyota biyya isitiin oomishuudhaaf yaalaa turte. Haa ta’u malee mootummaan biyyattii akka jedhutti, qoqqobbii Ameerikaa fi biyyoonni lixaa Iraan irra kaayanii turaniin wal qabatee jalqaba irratti meeshaalee Injiina misaa’eela oomishuuf barbaachisan argachuudhaaf rakkattee kan turte yoo tahu, carraaqqii cimaa ogeeyyota biyyattiitiin projektiin oomisha misaa’ela Kiruuz kun yeroo ammaa kan milkaahe tahuu beeksiste.
Qoqqobbiin akka Iraan meshaa waraana hin bitne biyyoonni dhihaa waggaa kudhanii oliif irra kaayan kun, biyyattiin qabeenyaa fi ogeeyyota biyya keessaatiin meeshaalee waraanaa gara gara oomishuuf yaaliin geggeessaa turte harki caalu kan milkaahe tahuu gabaasni arganne ni addeessa. Dabalataanis Iraan yeroo kana keessatti Saatalaayitii fi Xiyyaarota waraanaa gosa heddu biyya keessatti oomishuu dandeettee jirti.